Wararka – Page 2
Ururka Midowga Afrika ayaa war kasoo saaray dagaalkii ka dhacay muqdisho iyo sidoo kale guud ahaan xaaladda dalka, waxaana Qoraal ka soo baxay Midowga Afrika lagu sheegay inay si dhow ula socdaan in dagaal uu Muqdisho ku dhex maray labo ciidan oo ka wada tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed.
Sidoo kale Ururka Midowga Afrika ayaa waxaa la faray ciidamada Amisom in ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha ka socda Muqdisho, isla markaasna ay ilaaliyaan hantida iyo nafta; Midowga Afrika, Qaramada Midoobey iyo Villa Soomaaliya.
31st January 2021 by Barre Leave a Comment
Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa Goordhow War kasoo saaray Shirka Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isugu yeeray Madaxda dowlad Goboleedyada dalka ka jira iyo Gobolka Banaadir.
Qoraal kasoo baxay Xafiiska Qaramada Midoobay ayaa lagu soo dhaweeyay Shirka wadatashiga ee Madaxweynaha uu isugu yeeray Madaxda maamulada oo maalinta berri ka furmi doona Magaalada Dhuusamareeb, loogana hadli doono khilaafka doorashada.
Qaramada Midoobay ayaa Madaxda dowladda iyo kuwa maamul Goboleedyada ugu baaqday inay shirkaas ay ku gaaraan heshiis isku tanaasul ah, isla markaana si deg deg ah loogu fuliyo heshiiskii horey looga gaaray doorashada 17-kii Sebtember.
“Bahda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxa ay soo dhoweynayaan shirka uu Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed ‘Farmaajo’ isugu yeeray Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Fedaraalka ah magaalada Dhuusamareeb, waxa ayna ku boorrinayaan hoggaamiyeyaasha Soomaaliya in ay heshiis isku tanaasul gaaraan si degdeg loogu fuliyo nuucii doorasho ee 17-kii Sebtember”.
Beesha Caalamka ayaa wada dadaal xoogan oo ay ku dooneyso inay kusoo gaba-gabeyso khilaafka hortaagan qabsoomida doorashada dalka ka dhaceysa, Wakiilo ka socday Beesha ayaa shalay kulan la qaatay Madaxweyne Farmaajo, iyagoona kala hadlay xal u helida khilaafka doorashada.
CC Shakuur oo durbo ka hadlay Shirkii Madaxda M/Goboleedyada la isugu yeeray
27th January 2021 by Barre Leave a Comment
Ra’iisal Wasaaraha Talyaaniga, Giuseppe Conte, ayaa Madaxweynaha waddankaas u gudbiyay warqadiisa iscasilaadda, kadib markii Xukuumaddiisa lagu dhaliilay qaabka ay u wajahday Fayraska Korona.
In ka badan 85,000 oo muwaadiniinta waddankaas ah ayaa u dhintay cudurka.
Conte ayaa rajeynaya in Madaxweynaha Talyaaniga uu u oggolaan doono inuu soo dhiso dowlad xooggan, kadib markii uu lumiyay aqlabiyaddii uu ku lahaa golaha senate-ka.
Haddii uu ku guuldaraysto hawshaas, waxa loo xil-saari doonaa qof kale oo haddii uu isna soo dhisi waayo xukuumad adag uu dalka u dareedi doono doorasho horleh.
Conte oo jaamacad ka dhigi jiray maadada qaanuunka ayaa todobaadkii hore ka badbaaday cod kalsoonida loogala laabanayay oo ay u qaadeen xubnaha aqalka hoose.
Codka ayaa loo qaaday kadib markii uu isbahaysiga talada haya ka baxay xisbi yar oo lagu magacaabo Italia Viva, kaasoo uu hogaamiyo ra’iisal wasaarihii hore, Matteo Renzi.